Kooxda Real Madrid oo lacag kaash ah Kroos ama Isco midkood ku dareysa si ay u hesho xiddig ka tirsan Juventus – Gool FM
(Madrid) 10 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay doonayso mid ka mid ah xiddigaha sare ee naadiga Juventus.
Los Blancos ayaa la warinayaa inay isku dareyso lacag kaash ah iyo Kroos ama Isco midkood si ay u la soo wareegto ciyaaryahanka kooxda Juventus ee Dybala.
Majaladda Sport Mediaset ayaa warinaya in Kooxda Real Madrid dalab ka gudbinayso ciyaaryahanka Juventus, isla markaana ay heshiiska qeyb uga dhigayso Toni Kroos ama Isco midkood, si ay u la soo saxiixato Paulo Dybala.
Kooxda reer Spain ayaa la sheegayaa inay wadar ahaan ciyaaryahankan Dybala ku qiimeynayso adduun dhan 100 milyan oo euro oo u dhiganta 90 milyan oo gini ama 118 milyan oo dollar, waxaana ay rabtaa heshiis qiimahaas ku kacaya inay la hortagto kooxda reer Talyaani.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Juventus ayaa doonaysa inay sii haysato xiddigan reer Argentine, iyadoo maamulka kooxdaas uu doonayo inay macallin Andrea Pirlo u dhisaan naadi adag, maadaama dhowaan laga soo reebay kooxda tartanka Champions League.